Iphupha elimnandi kunye neenenens ezivela eViCalze
Ubuhle bethu buxhomekeke ekuphumuleni okulungileyo kwaye, ngokukodwa, ukusuka ebuthongweni obuhle kunye nobomi obuhle. Uninzi lwabafazi baqhelana nale meko xa ubusuku obungalali buya kukhokelela kwimiphumo enjalo engathandekiyo njengobumnyama obusweni phantsi kwamehlo, ibala elimnyama okanye ityhila yelinen elukhuni. Nangona izilwanyana ezinokungqiniswa kunye neengcamango zangoku zakusasazi azikwazi ukuhlangabezana nazo ezi ngxaki rhoqo. Yingakho kubaluleke kakhulu ukubonelela ngeemeko zokuphumla ebusuku kwaye uzikhusele kule ntsasa "inkumbulo". I-VivaCalze iqinisekile ukuba izambatho ezintle zangaphambili zelinen zidlala indima ebalulekileyo ekuhleleni ukulala okunempilo nokuvakalayo. Ngokukodwa kubasetyhini abakhethekileyo abakhetha izambatho eziphathekayo ezizilungeleyo zokulala, i-VivaCalze inikeza uluhlu olubanzi lwezambatho zangaphantsi, ezidalwe ukunika amaphupho amnandi kunye nokungakhathali.
Khetha iingubo ezikhululekile zokulala
Luhlobo luni lweengubo zokulala? Oogqirha babonisa ngokuqinisekileyo ukuba ibhinqa elincinci ye-ilinen yangaphambili yelineni yenziwe ngeempahla zendalo, kuba umsebenzi oyintloko wokulala isethi ukuvumela umzimba ukuba uphumule kwaye ulusu luphefumle ngokukhululekile. Ihambelana ngokupheleleyo nale njongo yelinen kuphela kwi-silk, i-cambric, i-flax, ikotoni, ijezi. Yingakho kwimihla ngemihla ukugqoka kukufanelekile ukukhetha iipjama kunye neengubo kuphela ezivela kwindwangu yendalo. Izinto eziphathekayo, ezinjengokwenziwa kosilika okanye okufakelwayo, zifanelekile kwiimeko ezizodwa - ezinjalo izelinen zangaphambili zingasetyenziswa, umzekelo, ukukhangela umthandi. Ngendlela, kwikhathalogu ye-VivaCalze isitolo se-intanethi unokufumana amanqaku amaninzi amnandi ama-pajamas kunye neekhati ezenziwe ngezinto eziphathekayo kumgangatho naziphi na izihlandlo.
I shirt okanye iipajama?
Ngokumalunga nesitayela kunye nokubukeka, kubalulekile ukuba iingubo zangaphantsi ozikhethileyo zinqunyulwa mahhala, ukwenzela ukuba ungavumeli ukuhamba. Kule njongo, iikhati lebusuku lincinci ngaphezu kobude. Ngenxa yokusikwa kwayo, iqinisekisa ukujikeleza kwegazi ngokuqhelekileyo kwaye ikhusela ekugqithiseni. Iiparajama ezininzi zifaneleke ngakumbi kwabasetyhini abanoyikrakra, kwaye iifutshane ezimfutshane kunye nee-T-shirts zikhethiweyo ezintle kumantombazana asebenzayo. Kwakhona, xa kuthengwa ama-pajamas, ingqalelo ekhethekileyo kufuneka ihlawulwe kwibhande kunye nokunqunyulwa kweebhulukhwe. Iingubo kufuneka zibe bubanzi ngokwaneleyo kwaye zikhululekileyo, kwaye ibhanti e-elastic ebhanti kufuneka ibambe kakuhle, kodwa ungayifaki. Qiniseka ukuba uzame kwikati yokulala oyithandayo ngaphambi kokuthenga. Kubaluleke kakhulu ukuba uziva unxibelelwano lweethambo kwesikhumba uze ukhethe ubungakanani obufanelekileyo.
Indlela yokwahlula i-silk yemvelo kwi-silk yokufakelwa?
Ukukwahlula izinto ezibonakalayo kwizinto zokwenza izinto zanele ngokwenza uvavanyo oluncinci, oya kufuna iiminganiso kunye nemigca emibini yelineni. Ngoko, iphunga kunye nesimo sokutshisa singabonwa njengesilika sangempela. Ukuvumba kosilika wendalo ngexesha lokutshisa kuya kufana ne "phunga" leenwele ezitshiswayo okanye uphondo olutshitshisiweyo, kwaye intambo ngokwayo iya kutshisa ngokukhawuleza kwaye ingenasala. Kodwa i-analogue yokufakelwa ayiyi kutshisa, kodwa iza kuqala ukuyibilika, ngokukhawuleza ibe yinto, kwaye iphunga ngokwayo liya kuba yicekicic. Ukuhlukanisa ubunqwenela benobumba obuchanekileyo kwaye ngokubhekiselele kubuchule obukhethekileyo: xa uhlolisisa ngokucophelela izicubu elangeni, kuya kubakho uphawu olugqithiseleyo.
Iimpawu zebhinqa eziphathekayo, i-Spring 2015, iifoto zamanqaku amaninzi kakhulu
Ubuncitshisi obuncinane: iqoqo leBetty Barclay S / S 2016
Ingulube ephekiweyo yengulube kwi-multivark
Imfundo engabizi ngaphesheya
Ziziphi na amayeza endiyithathayo kunye ne-allergies
Roma Bilyk, i-biography
Jelly kwi strawberry
I-muffins e-chocolate nge-glaze epholile
I-Cottage cheese pie kwi-multivariate
Ifenitshala kwisitayela se-Art Art entsha yaseRashiya
Indlela yokuziphatha ngayo embhedeni nomntu? Iingcebiso ezimbalwa